Paikady 4 hanovana ny mpitsidika vaovao ho lasa mpiverina | Martech Zone
Paikady 4 hanovana ireo mpitsidika vaovao ho lasa mpiverina
Zoma, Desambra 18, 2015 Alatsinainy Janoary 4, 2021 Douglas Karr
Manana olana goavana eo amin'ny sehatry ny atiny izahay. Saika ny loharanom-pahalalana rehetra novakiako momba ny varotra atiny dia misy ifandraisany mahazo mpitsidika vaovao, mahatratra vaovao mpihaino kendrena ary mampiasa vola amin'ny vao misondrotra fantsona haino aman-jery. Paikady rehetra ny fahazoana izany.
Ny fahazoana ny mpanjifa no fitaovana miadana indrindra, sarotra indrindra, ary lafo amin'ny fampitomboana ny vola miditra na inona na inona indostria na karazana vokatra. Fa maninona no very io zava-misy io amin'ny paikady marketing amin'ny atiny?
Sahabo ho 50% eo ho eo ny mora amidy amin'ny mpanjifa efa misy noho ny manaova fanantenana vaovao araka ny Marketing Metrics
Ny fampiakarana 5% amin'ny fitazonana ny mpanjifa dia afaka mampitombo tombony amin'ny 75% araka Bain sy ny Orinasa.
Ny 80% n'ny vola ampidirin'ny orinasanao dia avy amin'ny 20% -n'ny mpanjifanao efa misy ihany Gartner.
Raha ny orinasanao dia manokana fotoana sy hery amin'ny paikady fitazonana ny mpanjifa, ary fantatrao fa ny paikadim-barotra amin'ny atiny dia mitarika mpanjifa vaovao, tsy misy dikany ve izany - amin'ny dian'ny mpanjifanao - ny fanampiana ireo mpitsidika anao vaovao hiova ho mpitsidika tafaverina dia samy mahomby. ary hampiakatra be ny vola miditra? Fahaiza-misaina fotsiny.
Martech Zone mitohy fitomboana avo lenta isa-taona isan-taona nefa tsy mandany vola amin'ny fividianana mpitsidika vaovao. Mazava ho azy, ataonay amin'ny fanatsarana hatrany ny traikefan'ny mpampiasa sy ny kalitaon'ny votoatiny ny ankamaroan'io fitomboana io - saingy ny sasany amin'ireo paikady ampiasainay dia ambany kokoa sy mora ampiharina:
Email Subscriptions - Amporisiho ny bilaoginao amin'ireo mpitsidika voalohany popup na fikasana hivoahana fitaovana. Ny fampitana ny tombotsoan'ny mailakao ary avy eo manome karazana fanentanana ho an'ny mpitsidika dia afaka mitondra mailaka vitsivitsy… izay mety hanjary mpanjifa maharitra ..
Fampandrenesana an'ny Browser - Ny ankamaroan'ny mpizaha dia nampiditra fampandrenesana momba ny birao ao amin'ny rafitra fiasan'ny Mac na PC. Naparitaka izahay Vahaolana fampandrenesana an'ny OneSignal. Rehefa tonga amin'ny tranokalanay amin'ny alàlan'ny finday na birao ianao dia anontaniana ianao raha te hanaiky ny fampandrenesana amin'ny birao na tsia. Raha avelanao izy ireo, isaky ny mamoaka izahay dia alefa fampandrenesana. Manampy mpamandrika am-polony isan'andro izahay ary miverina an-jatony isan-kerinandro.
Famandrihana famahanana - fanatsarana sy fampidirana a Serivisy famandrihana fahana manohy mandoa. Betsaka ny olona no mino fa maty ny feed - nefa mbola mahita mpamandrika vaovao am-polony am-polony isan-kerinandro izahay sy mpamaky an'arivony miverina amin'ny tranonkalantsika.
Fanarahana ara-tsosialy - Raha efa nihena ny lazan'ny sakafom-piainana, nihombo ny fiarahamonina. Ao ambadiky ny fivezivezena amin'ny motera fikarohana, ny fifamoivoizana amin'ny haino aman-jery sosialy no mpiara-miombon'antoka voalohany amin'ny tranokalanay. Na dia tsy azo atao aza ny manavaka ny fifamoivoizana eo amin'ny fanarahan'ny olon-kafa na ny an'ny antsika, dia fantatray fa rehefa nitombo ny fanarahanay dia mihatsara ny fifamoivoizana.
Ny fitazonana ny mpamaky dia tsy fampody ny olona hiverina fotsiny. Ireo mpamaky izay miverina foana, mamaky ny atiny ary mifampiraharaha amin'ny marikao rehefa mandeha ny fotoana dia manaiky anao amin'ny fahefana anananao ary mampitombo ny fahatokisany anao. Ny fitokisana no lynchpin izay manosika mpitsidika ho lasa mpanjifa.
Ao amin'ny tatitry ny Google Analytics Behaviour dia azonao atao ny mijery ny Tatitra vaovao vs Returning. Rehefa mijery ny tatitra ianao dia aza hadino ny manova ny elanelam-potoana sy manamarina ny bokotra mampitaha raha mitazona ny mpamaky na tsia ny tranokalanao na tsia. Ataovy ao an-tsaina, mazava ho azy, ny volavolan-dalàna tena izy satria ny Google Analytics dia miankina amin'ny cookies manokana ho an'ny fitaovana. Rehefa manadio cookies ny mpitsidika anao na mitsidika amin'ny fitaovana samihafa dia tsy isaina feno sy marina izy ireo.
Tao anatin'izay roa taona lasa izay dia nampifantoka ny ankamaroan'ny fampiasam-bolanay amin'ny paikady fitazonana izahay. Nahomby ve izany? Izany mihitsy! Ny fiverenana mitsidika dia miakatra 85.3% on Martech Zone. Aza hadino fa tsy miavaka ireo mpitsidika - fitsidihana ireo. Nampitomboinay avo roa heny ny isan'ireo mpitsidika izay niverina tao anatin'ny herinandro 1 taorian'ny nitsidihany voalohany ilay tranonkala. Ka - ny isan'ny mpitsidika tonga dia nitombo, ny isan'ireo mpitsidika isaky ny mpitsidika niverina, ary ny fotoana anelanelan'ny fitsidihana dia nahena. Zava-dehibe izany… ary ny fidiram-bola dia mandeha tsara kokoa.
Ny mpitsidika tonga dia mety hanondro anao amin'ny orinasa azonao ampiana, na hanakarama anao. Raha tsy miraharaha ny isan'ny mpitsidika tafaverina amin'ny tranokalanao ianao dia mandany teti-bola, hery ary fotoana be dia be.
Tags: tatitra momba ny fitondran-tenafampandrenesana amin'ny browsertetik'asa ara-barotra ao amin'ny marketingmailakafamandrihana fahanaGoogle Analyticsgoroostvaovao mifanohitra amin'ny fiverenanavaovao vs miverinaNewslettertafaverina mpitsidikaniverina mpitsidikahaino aman-jery sosialymedia sosialy manarakampanjifasumome
Inona ny Omni-Channel? Ahoana ny fiatraikany amin'ny varotra amin'izao vanim-potoanan'ny fialantsasatra izao?
Dec 20, 2015 amin'ny 3: 48 AM
Efa nitady fomba hahazoana mpitsidika tafaverina, saingy miankina amin'ny akany toa izany. Handeha hanandrana ireo fampandrenesana momba ny browser 🙂
9 Nov 2016 amin'ny 10:23 maraina
Lahatsoratra mahafinaritra. Heveriko fa indraindray ny olona dia manadino ny fitsidihana tranonkala iray fotsiny, tsara ny manana karazana rafitra fampandrenesana toy ny Newsletter na ny fampandrenesana momba ny browser. Raha ny marina, ny mailaka mailaka taloha dia miasa tsara ho antsika (PressPad).
Ny fampitomboana ny fihazonana ny mpampiasa dia tena iray amin'ireo tanjonay lehibe indrindra tamin'ny namoahanay ny PressPad News, ny vokatray ho an'ireo bilaogera. Mamorona rindranasa finday ho azy ireo izahay, izay mampandre ny mpampiasa ny lahatsoratra vaovao navoaka rehetra, mitazona azy ireo ho vaovao hatrany ary manome antoka fa hifandray hatrany izy ireo. Ahoana ny hevitrao momba ny vahaolana toy izany?